အပေါ် Posted 11 / 11 / 2019 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
အဓိကမေးခွန်းက, သို့သော်, ဖြစ်၏ ဤအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ? ရလဒ်များရရန်ဤဆေးဝါးအသုံးပြုသည့်ယန္တရားနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောတွေ့ရှိချက်မရှိသေးပါ။ သို့သော်သုတေသီများသည် serotonin သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတားဆီးနိုင်သည့်အတွက်သီအိုရီတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပြီး Flibanserin ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။167933-07-5) ဦး နှောက်ထဲမှာ serotonin လှုပ်ရှားမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ၎င်းသည်အမျိုးသမီး၏လိင်ဆန္ဒကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်။ ထို့အပြင်ဆေးသည် norepinephrine နှင့် dopamine အပေါ်သွယ်ဝိုက်သောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများနှင့်လည်းဆက်နွှယ်သည်။
လေ့လာမှုများနှင့် post-hoc ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအရဤဆေးကို hypoactive အတွက်အသုံးပြုသော postmenopausal နှင့် premenopausal အမျိုးသမီးများအရ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အလိုဆန္ဒရောဂါအလေးချိန်ဆုံးရှုံးဖို့များပါတယ်။ ကြည့်ရအောင်။ အမျိုးသမီးတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့အလေးချိန်ကိုသိပြီးကိုယ်အလေးချိန်ကျစေမယ့်အရာမှန်သမျှကိုသုံးဖို့ကြောက်ကြတယ်။ ၎င်းသည် FLIBASERIN ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူသားများအပေါ်၌ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်းကိုမဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်းတို့အားသိသိသာသာအလေးချိန်လျော့ကျစေသည်ကိုသိရခြင်းကအလွန်အားရှိစရာပင်။ သင်အလေးချိန်ပြproblemsနာများနှင့်ရုန်းကန်နေရပြီး၎င်းကိုသယ်ဆောင်ရန်မလွယ်ကူသည့်နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေပါကဤဆေးသည်အပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Amazon Digital Services LLC - Kdp Print, 2018, Pink Viagra (Flibanserin) - လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသောအမျိုးသမီးများအားလိင်အင်္ဂါပိုမိုစုံလင်စေရန်အတွက်ကူညီပေးသည့်အမျိုးသမီးလိင်တိုးမြှင့်ဆေးပြားအကြောင်းစာအုပ်လမ်းညွှန်၊ 1729471161
Borsini F, Evans K၊ Jason K, Rohde F, Alexander B, Pollentier S (2002) ။ "flibanserin ၏ဆေးဝါး" ။ CNS မူးယစ်ဆေးဝါးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ 8 (2): 117-42
189 Views စာ
Oxandrolone (Anavar) အကုန်လုံးကိုမင်းသိဖို့လိုတယ်	ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအတွက် Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်